Izindlela eziningana ukupheka nezimfanzi ubhiya
Izintandokazi isidlo for ubhiya ngokuvamile kukhona nezimfanzi. Ngenhlanhla, ngaleso sikhathi ukuthenga kubo akunzima. Cishe kuzo zonke esitolo ungathola lezi ezinamagobolondo ngefomu eqandisiwe banoma iyiphi isayizi, kanye igobolondo noma ukuhlanzwa. Ngesikhathi esifanayo, uma ulandela imiyalo iphakethe, isidlo kungaba zihamba kunganambitheki abangacabangeli noma abanokhahlo, stretchy njengoba zenjoloba. Kunezindlela eziningana ukuze ukupheka nezimfanzi ubhiya, ezinye zazo ufuna ukuchaza.
Ukukhuluma ngokuthi indlela ukupheka nezimfanzi ubhiya, kuyafaneleka ukusho ukuthi iresiphi eyisisekelo ukupheka namanje ukupheka. Kulokhu, kubalulekile ukuthatha amanzi esikhungweni isilinganiso ka 1/3. Uma nezimfanzi okuphekwe igobolondo, usawoti kufanele ungeze okuncane okwengeziwe, mayelana 2 wezipuni engamalitha amanzi ngamunye, ngaphandle igobolondo usawoti efakwa izikhathi 2 ezincane.
Imbaza Abaningi aphonswe ngqo emanzini abilayo, yini iphutha main. Kungcono eneqhwa ngaphambi ukupheka umkhiqizo. Ukuze wenze lokhu, ake ume a nezimfanzi ngenkathi ngamanzi abandayo. Kumele kukhunjulwe ukuthi indlela yokuthola izimfanzi ubhiya ungachazwa ukuthi umphumela kufanele abe okubabayo-okunosawoti, isidlo elimnandi, ngakho usawoti kanye izinongo akuyona ekulondolozeni kuwufanele. I enhle kuyoba prawn yinkosi, usayizi esikhulu, okuyinto, nakuba eqolo ngaphezulu izindleko kodwa zidinga isikhathi esincane ukuyihlanza kubo kusuka kumasistimu asebenzayo, futhi ohlukaniswa ukunambitheka eliqhakazile.
Ungakwazi umane baphonse ukudla zangaphambi defrosted emanzini abilayo ukuze zazo wanezela usawoti kanye izinongo. Kulokhu, it jika isidlo, ephelele wokwengeza salads noma ezinye izindlela. Nokho, ukuze sithole appetizer ezinhle, kubalulekile ukuba bajwayelane ezinye izindlela ngaphambi ukupheka nezimfanzi ubhiya.
Uma kuthathwe nezimfanzi kakade ehlutshiwe, bangakwazi Fry. Ngemva defrosting kuyadingeka ukubeka umkhiqizo epanini esishisayo amafutha sunflower (ungathatha amafutha omnqumo ke ukunambitheka kuyoba ithenda ngaphezulu). Lokhu futhi wanezela usawoti kanye izinongo, aqotshwe nge lalamula elikhuhluziwe. Indishi is ethosiwe kwamaminithi ambalwa, kuze kube ngomzuzu lapho umkhiqizo sizothola umbala legolide. Ngaphambi bakhonze yakhe, ufafaze imifino oqoshiwe kangcono.
Kwezinye izimo, ngaphambi kokuba ziphekwe nezimfanzi ubhiya, udinga ukubabamba marinade for isigamu sehora. Marinade kalamula ixubene amakhambi oqoshiwe, futhi uthele okuholela ingxube nezimfanzi incibilikiswa. Ngemva kwesikhathi esithile, ngokuvamile ngokwanele for isigamu sehora, kodwa ungakwazi ukubamba ngaphezulu, wababeka epanini bese sikadali isivali sivalekile cishe imizuzu engu-5. Umkhiqizo osuphelile efakwa esitsheni esikhulu kungenziwa wakhonza rye croutons uhlobise nge imifino.
Ingabe ngempela ezithakazelisayo ukunambitheka nezimfanzi kuphekwe soy sauce. Kubalulekile nokukhumbula, hhayi wonke umuntu uyakuthanda ukunambitheka usoso, ngakho udinga ukupheka isidlo ngemva ngokuqinisekile eqikelela ukuthi wonke umuntu (umenywe) abe nesimo sengqondo esiqondile kuzo zonke izithako asetshenziswe ukupheka. Leresiphi kusho amakhilogramu komkhiqizo eqandisiwe lube ngu-100 amagremu usoso wesoya ngayinye. Kuphekwe fennel emanzini anosawoti, uhlale nezimfanzi imizuzu embalwa kwi-colander. Ngesikhathi esifanayo in a deep ukuthosa epanini emafutheni esishisayo ukuba Fry clove ambalwa garlic ochotshoziwe kanye nezinongo. Engeza lapha izimfanzi kanye soy sauce, amboze futhi imizuzu imizuzu engaba ngu-10. Salt isidlo akudingekile, kusukela sauce iqukethe usawoti ngokwanele.
Ngaphambi ukupheka izimfanzi ubhiya, futhi kufanele ucabangele sauce ngazo uzonikezwa. Ukunambitheka lokhu dish izogcizelela futhi sithuthukise alube garlic sigqoka, abenziwe ukhilimu omuncu noma ukhilimu, amakha, garlic kanye namakhambi.
Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi iresiphi nezimfanzi, akudingi isikhathi esiningi kanye nomzamo ka uwayehlalise sikhethwe kanjani, umphumela uyophinde abe isidlo esikhulu.
Indlela ukupheka amadombolo nge inyama namazambane?
Inyama Uphaya Puff khekhe
Ntoskrnl.exe - kuyini? incazelo eningiliziwe ingxenye
Cross-okuzenzakalelayo. ukwephulwa izibopho